Fahitana taolana tetsy Namontana :: Karan-doha iray teny ambony tsikafona • AoRaha
Fahitana taolana tetsy Namontana Karan-doha iray teny ambony tsikafona
Nitangorona ny olona teny Namontana, omaly tolakandro, tamin’ny fahitana karan-doha iray tao anaty tsikafona manakaiky ny CSB II. Ankizy nilalao teo akaiky teo no nahatsikaritra izany voalohany ka niantsoantso nampandre ny olon-dehibe.
Nampahafantarina ny zava-misy ny tompon’andraikitra teo amin’ny fokontany. Ireto farany no niantso ny mpitandro filaminana. Tonga teny an-toerana ny polisy avy ao amin’ny Kaomisarian’ny polisy, etsy Mahamasina.
«Nantsoina ny ao amin’ny Borigady misahana ny heloka bevava (BC). Taolana efa ela no fahitana an’ilay karandoha. Nolazaina ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Birao misahana ny fahadiovana (Bmh). Izy ireo no hikaroka ny vatana mety ho niaraka tamin’io karan-doha io ao amin’ny toerana nahitana izany », hoy ny polisy.
Mbola nanao fitsirihana teny an-toerana, hatramin’ny omaly hariva, ny mpitandro filaminana. Ny avy ao amin’ny Bmh kosa no hanatitra an’ilay karan-doha eny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly.
Lozam-pifamoivoizana Tsy avotra intsony ilay zazavavy voadonan’ny taksibe
Fandraisana zava-mahadomelina Zazakely nokapaina tamin’ny famaky
Savorovoro tany Sainte-Marie